Wasiirad Linde oo difaacday afhayeenka baarlamanka Ahlin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka ganacsiga dibadda Anna Linde iyo af-hayeenka baarlamanka Urban Ahlin. sawir: TT
La daabacay fredag 8 december 2017 kl 15.00
-Weligey kamana arag, kama dareemin falal noocaas ah aniga oo weliba muddo sannooyin badan la soo shaqeeynayay Urban Ahlin, sida ay sheegtay wasiirka ganacsiga dibadda Ann Linde oo ka faallooneeysay eedeymaha loo soo jeediyey af-hayeenka baarlamanka Sweden.
Wasiiradda ayaa dhanka kale sheegtay inay ku raac-san tahay inuu hab maamulkiisu yahay mid adag.
Ann Linde (S) ayaa difaacaday af-hayeenka oo ey xisbi ka wada tir-san yihiin, isla-markaana in muddo ah soo wada shaqeeynayeen.
-Qiyaastii shan iyo toban sannadood ayaan si dhow u wada shaqeeyneeyney Urban Ahlin. Kolka laga hadleyo eedeeymahan kala duwan ee qarsoodiga loogu soo jeediyey – weligay kama aanan dareemin saansaamahooda, sida ay sheegtay Anna Linde.
Linde ayaa ka gaabsatay inay ka faalooto eedeeymaha fara-xumeeynta oo markii ugu horreeysay loo soo jeediyay sannadkii 2008, kuwaasina oo baaris lagu sameeyey sannadkii 2010, maadaama aanay waxba ka ogsoonayn. Iyadoona intaa raacisay inay howsheedu ahayd hoggaanka sidaa daraadeed ay dhici karto in aanay arki karin ama maqli karin.
Maqaal lagu daabacay war-geeyska Dagens Nyheter ayaa laga bixiyay af-hayeenka inuu leeyahay hab hoggaamin adag qaasatan uu ku adag yahay haweenka.
-Kolka laga hadleyo hoggaankiisa, wuxuu Urban Ahlin leeyahay dabeecad hoggaan adag, balse waxaan u arkaayay iney u sinnaayeen hab-dhaqnkiisu haweenka iyo ragga, ma jirin hab ka adag oo uu haweenka ula dhaqmi jiray, sida ay sheegtay Linde.
Anna Linde ayaa ula jeedda Hab-dhaqanka hoggaanka adag mid cad oo toos ah iyo in isagana sidaa loola dhaqmo.
Wasiirka arrimmaha dibadda Margot Wallström iyo wasiirka suuqa shaqada iyo meeleeynta Ylva Johansson – ayaa dhankooda ka gaabsaday iney ka faalloodaan eedeeymaha loo soo jeediyay af-hayeenka baarlamanka.
Ku simaha labaad ee af-hayeenka baarlamanka Björn Söder (SD) ayaa sidoo kale taageeray Af-hayeenka ,at uu wareeysi siiyay war-geeyska DN. Söder ayaa sheegay inuu Urban Ahlin uu xilkiisa u guto si howl-kar iyo xil-ksanimo ku dheehan tahay.
Halka uu guddoomiyaha xil-dhibaannada xisbiga Socialdemokraterna, Anders Ygeman, sheegay inuu doonayo in baaris lagu sameeyo si looga gun gaaro eedeeymaha lagu daabacay war-geeyska DN shalayto ee loo soo jeedineyo af-hayeenka baarlamanka Sweden Urban Ahlin.